Waftigii uu Hogaaminayey Gudoomiyaha JWXO oo soo gabagabeeyey socdaalkoodii Kanada.
Dagaalo dhex maray ciidamada gumaysiga Itoobiya iyo ciidamada xoreeynta Ogaadeenya.
Ciidamada gumaysiga Itoobiya oo dagaal ka dhex huriyay Labada qoomiyadood ee Ogaadeenya iyo Oromada.
Xukumada Itoobiya oo kala diraysa Baarlamaanka ismaamulka Soomaalida Ogaadeenya.
Itoobiya oo isu diyaarinaysa dagaal ay mar kale ku qaado wadanka Eritrea.
Barnaamujkii aragtida halgamaaga oo aanu ku soo qaadan doono qaybtii koobaad ee Goroyooy gabal kuudhac iyo suugaan halgameed.
Waftigii uu hogaaminayey Gudoomiyaha Jabhada Wadaniga Xoreeynta Ogaadeenya Admiral Mohamed Omar Osman oo uu ka mid yahay Gudoomiyaha Cilmi Baarista iyo Qorsheyta ee JWXO Dr Mohamed Siraad Doolaal ayaa soo gaba-gabeeyey socdaalkoodii ay ku joogeen dalka kanada.
Waftiga oo yimid wadanka Kanada bishan Dec 10, 2004 ayaa intii ay joogeen dalka Kanada kulamo la yeesheeshay Jaalaaiyada Ogadeeniya ee iyo kuwa Soomaalida ee wadanka kanada.
Kulamadaas oo ahaa kuwo si buuxda ay dadweynaah Soomaaliyeed ee wadanka kanada uga soo qayb galeeen,iyagoo ku muujiyey taageerada ay u hayaan haglganka shacabka Ogaadeeniya ugu jiro aayo ka talintiisa.
Madaxda JWXO intii ay joogeen wadanka kanada waxay safaro ku kala bixyeen Magaalada Ottawa ee caasimada Kanada iyo Kitchiner (Kijineer) oo ku taala agagaarka Toronto. Magaalada Kitchiner oo uu Dr Doolaal safar ku aadey ayaa waxa uu kulamo halkaasi kula soo yeeshay Jaaliyada Ogadeeniya ee Magaladaasi isagoo warbixin ka siiyey geedi socodka halganka Ogadeeniya.
Dhica kale, Admiral Mohamed Omar Osman ayaa safar gaaban ku tagey Magaalada Ottawa halkaasi oo ka qayb galay shir ay soo agaasimeen jaaliyada Ogadeeniya ee Magaalada Ottawa, shirkaaas oo ay ka soo qayb galeen Jaaliyada Soomalida ee Magaalada Ottawa ayaa waxa uu ku bilowdey warbixin uu bixiyey Gudoomiyaha JWXO Admiral Mohamed Omar Osman oo ka warbixiyey ujeedada safarkiisa iyo halganka shacabka Ogadeeniya ugu jiro aayo ka talintiisa.
Gebagabadii waftiga JWXO intii ay joogeen dalka Kanada waxay martiqaadyo badan ka haleen Jaaliyadaha Soomaalida ee Magaalada Toronto, Jaaliyadahaas oo dhamaantood Madadaxda ku martiqaadey qado sharaf ama Casho sharafayo aad loo soo agaasimey, iyagoo Madaxada JWXO kulamo la yeeshay odey dhaqameedyada iyo aqoonyahyaniinta Jaaliyadaha Soomalida ee Magalaada Toronto
Waftigu wuxuu caawa oo Talaada oo bisha Dec 21, 2004 u socdaali doonaa wadanka Maraykanka,iyagoo halkaasi kulamo kula yeelan doona Jaaliyada Ogadeeniya iyo kuwa Soomaalida eek u nool wadanka Maraykanka.
Sida uu noo soo tabiyay wariyaha RX ee gobolka Nogbeed waxaa si xowli leh u socda dagaalada ku dhufo oo ka dhaqaaqa ah ee ay ku hayaan Ciidanka Waddaniga Xoreynta Ogadenya ciidamada gumeysiga Itoobiya ee ku sugan gobolada Ogaadeenya.
Weerar gaadmo ah oo ay 04.12.2004 ku qaadeen ciidamada wadaniga xoreeynta Ogaadeenya, ciidamo Itoobiyaan ah oo ku sugnaa meesha lagu magacaabo Xidhyare oo ka tirsan dagmada Garbo ayaa ciidanka naflacaariga ah ee gumaysiga Itoobiya lagaga dilay 5 Askari waxaana lagaga dhaawacay 8 Askari oo kale.
06.12.2004 dagaal gaadmo ah oo ay koox ka tirsan ciidanka wadaniga xoreeynta Ogaadeenya ku qaadeen ciidan Itoobiyaan ah oo marayay Suryasagaaro oo ka tirsan dagmada Shilaabo ayay ciidamada cadawga Itoobiya kaga dileen 7 Askari waxayna kaga dhaawaceen 13 Askari oo kale, dagaalkan oo kadis ahaa ayaa ciidamada Itoobiya jaha wareer ku riday waxaana ku dhacay kala fiig ay awoodi waayeen inay aag kaliya difaac ka galaan.
Sida oo kale dagaal 07.12.2004 ku dhex maray ciidanka geesiga ee xoreeynta Ogaadeenya iyo ciidanka gumaysiga Itoobiya Dharkeenlay oo ka tirsan dagmada Dhagax-Buur ayaa ciidamada cadawga wayaanaha lagaga dilay 3 Askari halka dhaawacyo halis ah loogu gaystay 7 Askari oo kale.
Isla 07.12.2004 iska hor imaad dagaal oo ku dhex maray ciidanka xoreeynta Ogaadenya iyo ciidanka ciidanka gumaysiga Itoobiya Qararo oo ka tirsan Dagmada Gunagado ayaa ciidanka cadawga lagaga dilay 5 Askari waxaana lagaga dhaawacay 5 kale.
Karin-Barkhadle oo ka tirsan dagmada Sagag dagaal ku dhex maray 09.12.2004 koox aad u tababaran oo ciidanka wadaniga xoreeynta Ogaadeenya ka tirsan iyo Ciidamo Itoobiyaan ah ayaa ciidamada xasuuqa ku caanbaxay ee gumaysiga Itoobiya lagaga dilay 4 Askari waxaana lagaga dhaawacay 7 Askari oo kale.
Isla 09.12.2004 Weerar gaadmo ah oo ay koox ka tirsan ciidanka wadaniga Xoreeynta Ogaadeenya ku qaadeen ciidamo Itoobiyaan ah oo marayay Labiga oo aan sidaas uga fogeen magaalada Dhagax-Buur ayaa ciidamada doolka ah ee gumaysiga Itoobiya lagaga dilay 13 askari halka dhaawacana la gaadhsiiyey 20 askari oo kale, dagaalkan ayaa ciidamada Itoobiya aad loogu caydhsaday waxaana habqankoodii uruuriyay gurmad uga yimid Magaalada Dhagax-Buur.
Ciidamada gumaysiga Itoobiya oo dagaal ka dex huriyay Labada qoomiyadood ee Ogaadeenya iyo Oromada.
Dagaal dhimasho iyo dhaawac sababay ayaa dhex maray shacabka Soomaalida Ogaadenya iyo Oromada ee ku nool dagmada Bardoode. Dagaalkan ayaa la sheegay in ay ciidamada Itoobiya soo galeen iyaga oo iska dhigaya shacabka Oromada, waxayna halkaas ku laayeeyn dad badan oo shacabka Soomaalida ka mid ah.
Intii muda ahba xukumada Itoobiya ayaa ku dadaalaysay sidii ay isaga horkeeni lahayd shacabka walaalaha ah ee Soomaalida iyo Oromada, qowmiyadahaas oo xukuumada Itoobiya dagaal hubaysan oo ay ku doonayaan xoriyadooda kala soo horjeeda.
Taliska Adis Ababa oo mar walba huriya dagaalada dadka shacabka ah ee qoomiyadaha Itoobiya ku hoos nool ayaa iska horkeenkan shacabka Soomaalida iyo Oromada ku guulaystay kadib markuu abaabulay wax uu ku sheegay doorasho lagu kala soo cayo maamulka dagmooyinka labada qoomiyadood xuduudkooda ku yaala. Waxgaradka qoomiyadaha Oromada iyo soomaalida ayaa doorashadaas ku tilmaamay mid lagu minjaxaabinayay dhaqanka iyo dariswanaaga labada qoomiyadood ka dhaxeeya, isla markaasna aan ku habooneen xiligan in khilaaf noocan ah labada qoomiyadood la dhex dhigo.
Dhinaca kale waxay xukuumada Itoobiya abaabushay dagaal dhex mara shacabka Soomaalida Ogaadeenya, waxayna dagaaladaas ka abaabushay dagmooyin badan oo ay ka mid yihiin Iimay, Abaqorow, Nusdariiqa, Miirkhaliif, Garbo, deegaanada u dhaxeeya Qabri-Bayax iyo Dhagax-Buur iyo deegaanka faafan oo ay hada ka socdaan dagaalo uu cadawgu ka danbeeyo oo ujeedada ka danbaysa ay tahay u kaalmeenta gumaysiga duliga ah ee Itoobiya.
Shir qarsoodi ah oo ay galeen 10.12.2004 xubno ka tirsan xisbiga maqaar saarka ah ee gacanta ku haya maamulka magaalada jigjiga iyo xubno xukuumada gumaysiga Itoobiya ka socda ayaa lagu go,aamiyay in la kala diro xubnaha Baarlamaanka ismaamulka Soomaalida, inta ka horeeysa doorashada la sheegayo in sanadka danbe Itoobiya laga qaban doono.
Xubnaha xisbiga ayaa laga soo reebayaa shan xubnood oo hawsha la sii wadi doona ninka dhawaan loo magacaabay in uu si dadban u hogaamiyo ismaamulka Soomaalida Ogaadeenya ee maqaar saarka ah. Shanta xubnood ee la soo reebay ayaa waxay kala yihiin, Maxamuud Dirir oo ah madaxa Xisbiga, Cabdi Jibriil oo ah madaxa maamulka maqaar saarka ah ee ismaamulka Soomaalida, Cali kuunay, Bashiir C/laahi iyo Daa`uud Diiriye.
Xubnahan kale ee lakala dirayo ayuu ku eedeeyay wasiirka fadaraalak Itoobiya Abay Sehay in ay gacan saar hoose la leeyihiin Jabhada ONLF oo dagaal hubaysan oo ay ku doonayso madax banaanida shacabka Ogadenya kala soo horjeeda taliska gumaysiga Itoobiya.
Warar aanu ka helay ilo la kalsoon yahay oo ku dhadhaw xafiiska kaligii taliye Malis Senawi ayaa sheegaya, diyaar garaw ay xukuumada Itoobiya ugu diyaar garoobayso in ay weerar mar kale ku qaado wadanka Eritrea, oo uu dagaal lagu hoobtay ku dhexmaray deegaanka Badame sanadihii 1998-2000.
Warkan ayaa tibaaxaya in uu Ra`iisal wasaaraha Itoobiya Melis Sanawi uu shir u qaban doono gudoomiyayaasha Kililada ee wadanka Itoobiya, kuwaas oo uu kala hadli doono sidii ay ciidamo iyo saadba ugu diyaar garayn lahaayeen dagaal lagu qaado wadanka Eritrea.
Taliska Itoobiya oo ku caanbaxay dhulbalaadhsi iyo in uu wadamada dariska ah xoog ku qabsado ayaa horay ugu gacan saydhag go`aankii ay soo saareen gudigii Jamciyada quruumaha ka dhaxaysa ay u xilsaareen khilaafaadka Xuduuda Eritrea iyo Itoobiya, kaas oo tilmaamayay in ay Eritrea leedahay Tuulada Badame iyo halka uu dhacayo xuduuda labada wadan.